Ungazi kanjani ukuthi ngabe i-iPhone yakho yintsha, ivuselelwe, yenziwa yaba ngeyakho noma yashintshwa | Izindaba ze-IPhone
URuben gallardo | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 25/01/2021 15:36 | Okokufundisa namanyuwali
Impela, uma uya ku-Apple Store bese uthenga i-iPhone, awungabazi ukuthi iyi-terminal entsha. Futhi, uma ungomunye walabo abavame ukuthola amamodeli afakwe kabusha -kulungisiwe- ungangabazi futhi. Noma kunjalo, Kuthiwani uma sikhuluma ngemakethe eseyenziwe? Bekungeke yini kube ngcono ukwenza isiqiniseko sokuthi leyo iPhone ohlose ukuyithenga ivelaphi?
Njengoba sifundile, kunezinhlobo ezi-4 zamacala ongazithola ku-iPhone: okusha, okwenziwe kabusha, okushintshwayo noma okwenziwe ngezifiso. Impela, lapho uthi nhlá, kunzima ngawe ukwazi ukuthi hlobo luni lwe-iPhone esikhuluma ngalo. Manje, uma kungukuthenga okungamasekeni, ngokuqinisekile ufuna ukwazi ukuthi ngabe leyo modeli idlule ezandleni eziningi. Futhi kusuka ku-Actualidad iPhone sizokwenza kube lula ngawe ukwazi imvelaphi yayo.
Ucabanga ukuthenga i-iPhone eyenziwe kabusha? Kulesi sixhumanisi uzothola amamodeli we-iPhone abuyiselwe kabusha nokuthi zithengiswa ngesiqinisekiso sokuthi zisebenza kahle. Ngaphezu kwalokho, uma uyithola futhi ungayithandi, ungayibuyisa ngaphandle kwesibopho futhi kalula nge-Amazon, ngaphandle kokuzibeka engcupheni.
Njengoba besifundisa kusuka ku-OSXDaily, nabanye izinyathelo ezilula ngemenyu yezilungiselelo sizokwazi ukwazi ukuthi ngabe i-iPhone yakho yintsha noma yamaqembu ama-3 alandelayo. Ukuthola, kuzofanele siye ku- «Izilungiselelo», chofoza ku- «Okujwayelekile» futhi kuzofanele ukuthi singene kwimenyu ye- «Ulwazi». Kulesi sigaba sizoba nayo yonke imininingwane mayelana ne-terminal: inguqulo ye-iOS esiyisebenzisayo, isitoreji esinaso esitholakalayo; zingaki izithombe esizigcinile; sisebenzisa muphi opharetha; inombolo ye-serial nokuthi yini esiyithandayo yingxenye ekhombisa "Model".
Uzobona ukuthi ngalo mqondo, izinhlamvu ezethulwa kithina zandulelwa incwadi. Lokhu kungaba: "M", "F", "P" noma "N". Ngezansi sichaza ukuthi ngamunye wabo usho ukuthini:
«M»: yincwadi ezokhomba ukuthi i-terminal iyi-a iyunithi entsha
«F»: kuzoba yi iyunithi ebuyiselwe kabusha; Abakwa-Apple bayibuyisile futhi bayithengisa ngenani elingcono ngoba kulokhu kungamasekeni
«P»: kuyinto iyunithi yangokwezifiso; okungukuthi, ibhalwe emhlane wayo
«N»: kuyinto iyunithi yokufaka esikhundleni lokho kudluliselwa kumsebenzisi ngoba kuye kwacelwa isevisi yokulungisa, isibonelo
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungasho kanjani ukuthi i-iPhone yakho isha, ivuselelwe, yangokwezifiso, noma iyashintshwa
UCarlos Luengo Heras kusho
Okwami ​​wuhlobo oluguqukayo kubha yobuhlakani ngenxa yenkinga nge-iPhone yasekuqaleni futhi ithi uN.
Phendula uCarlos Luengo Heras
Ngiyabonga ngaloyo mbiko ngithande kakhulu ukuthi ngingazi kanjani ukuthi ngabe i-iPhone yami isisha oh isetshenziswe kahle ..
Futhi uma ithi A ??
UPedro Reyes kusho
Nginelukuluku lokwazi, bengingakwazi lokhu, iqiniso ukuthi ngikuthola kujabulisa ukuthi ngikunikeza lolu lwazi.
Phendula uPedro Reyes
UJavier Ruiz Murcia kusho
Eyami nayo ithi N. Futhi bengicabanga ukuthi baphinde banginika yona ngoba eyami ibinguye. Ngingafaka isicelo?
Phendula uJavier Ruiz Murcia
Sanibonani! Bekunjani nge-iphone yakho imodeli iqale ngohlamvu N ???
Sawubona kuhle ngakho uma kuvela u-N kwimodeli kusho ukuthi akuyona entsha noma ingaba yintsha noma ngabe iyunithi engena esikhundleni?
Njengabanye engibabona lapha, benginenkinga ngeyami yasekuqaleni futhi i-SAT yayishintsha yaba yile enginayo manje, eyayintsha ngokuphelele, kodwa inombolo yayo yemodeli nayo iqala ngo- "N". Kungalungiswa, kepha angicabangi kanjalo. Baze banginikeza ne-invoyisi "yokulungisa" lapho ngiyithatha njengokungathi ngiyale iselula entsha (futhi ngentengo yayo yasekuqaleni emakwe, okwakuyinani elisha) kodwa ngesaphulelo ukuze ngikhokhe uziro. Ngibona lapho ukuthi u- "N" akusho nje ukuthi yimalimboleko ngenkathi belungisa eyakho, kepha futhi nokuthi yibo abazongena esikhundleni sabo esikhundleni sokulungisa eyakho bakunikeza enye iyunithi.
Njengamanje ngino-6 + ongena esikhundleni se-8 + yami kusethi futhi ithi "M", angazi ukuthi lolo lwazi lunokwethenjelwa kangakanani.
ndoda, isitolo singakunika ukuphela okusha uma sifuna futhi singenakho "ukubolekisa" okutholakalayo ...
UJavier Ruiz kusho
Ulwazi olukulesi sihloko luyiqiniso ngokuphelele, futhi ucishe wonakalisa ukuthengiswa kwe-iphone x yami ezinsukwini ezimbalwa ezedlule.
Ngathenga i-iphone x yami ngosuku eyaphuma ngalo cishe ngonyaka odlule futhi inombolo iqala ngo-F.
Lapho ufunda umbhalo wakho, shayela insizakalo yamakhasimende e-apple, okuthi ngemuva kokubonisana kaningana, ikuphike ngokuphelele lokho okubikwa yileli khasi. Baphikisana nokuthi akunakwenzeka ukuthi kube neyunithi ebuyiselwe kabusha ngosuku lokuqala lokuthengisa emphakathini, futhi okwesibili ebhokisini kubeka inombolo efanayo ye-serial futhi amayunithi abuyiselwe awathunyelwa ebhokisini le-Apple nazo zonke izesekeli, kepha ibhokisi elingenawo amabheji (lokho kwenzeke kimi nge-iphone 5 nangewashi le-apula lomkami).
Futhi futhi ukuthi ngathenga iXS MAX ngosuku olufanayo lapho iqala ukudayiswa futhi inombolo yayo iqala i-TB NGU-F.
Uma uhlose ukuba yikhasi eliyinkomba ekubuzweni nge-iphone, kufanele uqinisekise imininingwane yakho kangcono. Kuyiseluleko. kwesinye isikhathi abasebenzi balinyazwa ngephutha futhi unesibopho njengabafundisi.
Phendula kuJavier Ruiz
Ngiyaxolisa ukukutshela uJavier, ukuthi kunamakhasi amaningi asuselwe kulezi zinhlamvu ukukhomba umsuka, empeleni ngine-iPad yeminyaka emithathu eyedlule, i-iPhone ne-Apple Watch, futhi zonke ziqala nge-M. Kuphakathi kokuthi amakhodi ashintshile noma angiwachazi. Ngakolunye uhlangothi, kungaba yinto engavamile kakhulu ukuthi amadivayisi amasha afike naleyo ncwadi, ngaphandle kokuthi ashintshe ifomethi. Ngilindele ushintsho olungenzeka lochungechunge lwewashi 3, futhi uma belushintsha, ngizoluthola kumuntu wokuqala. Ngikufisela okuhle.
Kwenzeka into efanayo kimi nakuJavier.
Ngine-iPhone XS engiyithenge ngemuva nje kokuhamba, ngeMM, ivaliwe, futhi inombolo yayo ye-serial iqala ngoF.
Ngathenga ne-iPhone 8 Plus ngoJuni, ngeMM, yafakwa uphawu, futhi iqala futhi ngo-F.
Ngabe bangithengisele omakhalekhukhwini ababili ababuyekezwa njengamaselula amasha? Noma i-Apple isabalalisa njengamadivayisi amasha avuselelwe?
Iqiniso ukuthi manje bangishiyile nginokunambitheka okubi emlonyeni wami.
Ngenhlonipho efanele, abanumzane abazizwa bedidekile / bekhohlisiwe; kufanele wazi ukuthi izinkampani (abanye abasabalalisi bama-Apple emazweni athile, neminye imikhiqizo) zisebenzisa kabi ukwaziswa okunjalo okungeyona ukuze zithengise imikhiqizo ngokungafanele.
Ungawenza kanjani umsebenzi weMilayezo ku-iCloud kusuka ku-iPhone
I-WhatsApp ifika kuCarPlay ngaphambi kwe-Apple Watch